Local News Archives - Page2of 20 - Nalonetardiary
ကားအမည်ပြောင်း အခွန် ၃% ဘယ်တော့နောက်ဆုံးလဲ မေးနေကျတဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ပါ
ကားအမည်ပြောင်း အခွန် ၃% ဘယ်တော့နောက်ဆုံးလဲ မေးနေကျတဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၁-၁၀-၂၀ မှစ၍ ကားအမည်ပြောင်း အခွန် ၃% မှ ၆%သို့အခွန်ဦးစီးဌာန မှတိုးကောက်ပါမည်။ (ကားအမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်မည့် မိတ်ဆွေများခဗျ) မိမိကား အမည်ဖောက်လုပ်ရန်အတွက် အရင်ဆုံး မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ် အခွန်ရုံးသို့ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ သွားရောက် လျှောက်ထားရပါမည်။ 1 – သန်းခေါင်စာရင်း (မူရင်း၊ မိတ္တူ)2– မှတ်ပုံတင် (မူရင်း၊ မိတ္တူ)3– Owner book (မူရင်း၊ မိတ္တူ)4– Wheel tax (မူရင်း၊ မိတ္တူ)5– အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (မူရင်း၊ မိတ္တူ) (အရောင်းအဝယ်စာချုပ်သည် အမည်ပေါက်နှင့် မိမိ … Read more
Categories Local News Tags ကားအမည်ပြောင်
ဘယ္ကေန ဘယ္လိုကူးစက္ခဲ့လဲဆိုတာ မသိရေသးဘူးတဲ့ သာေကတ က ဖုန္းျပဳျပင္ေရးဆိုင္ က ၀န္ထမ္း
ပိုးတွေ့လူနာ ဖုန်းပြင်သူနေထိုင်သည့် သာကေတ(၁)လမ်းကို Lockdown ချ ပိုးတွေ့လူနာ(၇၀၁)ဖုန်းပြင်အလုပ်သမားနေထိုင်တဲ့ သာကေတမြို့နယ်၊ (၂)မြောက်ရပ်ကွက်ကတိုးချဲ့ (၁)လမ်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ည(၁၂)နာရီကျော်လောက်က Lockdown ချလိုက်ပြီလို့ (၂)မြောက်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတင့်လွင်က One News ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။ အဲဒီပိုးတွေ့လူနာနဲ့အတူ နေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်လေးဦးကိုလည်း လှော်ကားရှိQuarantine စင်တာကိုခေါ်ဆောင်ဖို့လာခေါ်နေပြီလို့လည်း ဦးတင့်လွင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ “ သူ့ကအိုင်ဖုန်းတွေဘာတွေပြင်တာ။ လောလောဆယ်တော့ သူ့မိသားစုဝင်လေးယောက်ကို Quarantine ပို့ဆောင်မယ်။ ပို့တော့မယ်။ ကားလာတော့မယ်။ သူ့မိသားစုကို ကျန်းမာရေးလည်းစစ်မယ် ” လို့ ဦးတင့်လွင်ကပြောပါတယ်။ အဲဒီပိုးတွေ့လူနာဟာ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံအနီးက လပြည့်ဝန်းပလာဇာရှိ ဖုန်းပြုပြင်ရေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်ကနေဘယ်လိုကူးစက်ခဲ့လဲဆိုတာ မသိရသေးဘူးလို့ ဦးတင့်လွင်ကပြောပါတယ်။ ဩဂုတ်လ(၂၉)ရက်နေ့ ည(၁၁)နာရီ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရCOVID-19 လူနာသစ်(၇၇)ဦးအနက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်က အသက်(၂၆)နှစ် အရွယ်အတည်ပြုလူနာ(၇၀၁)ကတော့ ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိသလို COVID-19 အတည်ပြုလူနာနဲ့ထိတွေ့ထားသူလည်း မဟုတ်သလိုရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ … Read more
Categories Local News Tags သာကေတ
Q ပီးသွားရင် ကိုခင်မောင်မြင့်ကြီးကိုလဲ လွမ်းနေကြဦးမယ် ..
August 28, 2020 by Nalonetar Diary
မနက်မနက်ဆို အဲ့ဒီ မျက်စောင်းထိုးအဆောင် ၁၀လွှာကနေ အောက် ၂ လွှာကို “ဟိုကောင်…. ခင်မောင်မြင့် နိုးပြီလားဟ “ဆိုပြီး ဝရံတာထွက် အော်အော်နှိုးတဲ့အသံကြီးက ဘေးနားက အဆောင်ကလူတွေပါအကုန်လန့်နိုးစေရော။ အဲ့လို ဆယ်ခါလောက် ခေါ်ပြီးမှ အဲ့ ခင်မောင်မြင့်ဆိုတဲ့လူက အိပ်ချင်မူးတူးထလာပြီး ပုဆိုးနဲ့ မျက်နှာပွတ် အပေါ်ထပ်ကို မော်ကြည့်ပြီး… နိုးပြီးဟ…. စွတ်အော်မနေနဲ့ ဘေးအဆောင်က လူတွေနိုးကုန်မယ်ဘာညာထဖြေတာ။တကယ်က သူမနိုးခင်ကတည်းက အကုန်လုံးက နိုးနေနှင့်ကြပြီးသား။ အံမယ် သူတို့ နှစ်ယောက်က ဘေးအဆောင်နဲ့ ကြားအလွှာအခန်းတွေက လူတွေကိုရှိတယ်တောင်ထင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့ တစ်ဆောင်လုံး တစ်တိုက်လုံးက မလေးရှားကပြန်လာကြတဲ့သူတွေချည်းပဲ။အလုပ်လုပ်ကြတော့လည်း စက်ရုံအတူတူ ၊ အဆင်မပြေ အဆင်ပြေကြတာလည်း အတူတူတွေ ဆိုတော့ အတော်ရင်းနှီးကြပုံရပါတယ်။ ဒီရောက်မှ အခန်းကွဲ သွားကြတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေလည်းဖြစ်မယ်။တစ်ချို့ဆို … Read more
Categories Local News Tags မင္းဓမၼပညာ့ရိပ္သာ.